Xukuumadda Soomaaliya oo cambaaraysay iskudaygii afgembi ee Turkiga. – Radio Daljir
Xukuumadda Soomaaliya oo cambaaraysay iskudaygii afgembi ee Turkiga.
Luulyo 16, 2016 9:07 b 0
Muqdisho, July 16, 2016…..Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo isugu yimid shir aan caadi ahayn oo shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa waxaa si xoogleh loogu canbaareyey Afganbigii dhicisoobay ee la rabay in lagu kala dhantaalo Horumarka iyo Dumaquraadiyadda ay gaareen dalka iyo dadka Turkiya ee aan walaalaha nahay.
Dawladda F. Soomaaliya waxay ka tacsiyeynaysaa Dawlada iyo shacabka an walaalaha nahay ee Turkiya. Waxana goluhu tacsi u direy dadkii waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadaasi, iyadoo Intii dhaawaca ahna ilaahey uga baryey caafimaad deg deg ah in uu siiyo.
Xubnaha Golaha Wasiirrada waxay isku raaceen qodobada soo socda iyadoo la tix gelinayo codsiga Dawlada aan walaalaha nahay ee Turkiya:
1. Inla joojiyo adeegyadii ay bixin jirtay Nile Academy ee Dugsiyada, Isbitaalada iyo wixii kale oo hoosyimaada.
2. In howl wadeenada Nile Academy ay mudo 7 cisho gudaheed ah dalka uga baxaan oo ka bilaabaneysa 17 July 2016.
3. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiya waxay si wada jir ah u balan qaadayaan in adeegyadii caafimaad iyo waxbarasho ee ay bixin jirtay Hay’adaasi sidoodii u socon doonaan. Maamul cusub na loo yeeli doono.
Dhanka kale, Golaha Wasiirrada ayaa shirkoodii maanta si rasmi ah ugu magacaabay Taliyaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka in uu ahaado S/G C/laahi Gaafow Maxamuud.
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Soomaaliya ayaa warbixin laga dhageystay ku sheegtay in gurmad deg deg ah loo fidiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku xaniban dalka South Sudan oo muddooyinkii danbe qalalaaso siyaasadeed ka jireen, waxana ay Goluhu isku raaceen in dadkaasi gurmad loo fidiyo.
Madaxweynaha oo ka qaybgelaya shirweynaha 27-aad ee Midowga Afrika.
DHEGEYSO-Soomaliland iyo dad shacab ah oo ku dagaalamay Sanaag.